Ungalitsala njani igazi kwiBhokhwe
NguCheryl K. Smith
Ugqirha wezilwanyana uza kuphuma eze kwifama yakho eze kwenza uninzi lweemvavanyo kwiibhokhwe zakho. Kodwa unokuzinza ngakumbi kwaye wonge imali ngokutsala igazi kwiibhokhwe zakho kwaye uthumele iisampulu ngqo kwilebhu. Buza ugqirha wezilwanyana okanye omnye umfuyi okhululekile ukuzoba igazi akubonise indlela abenza ngayo, okanye ulandele la manyathelo angezantsi.
Ugqirha wezilwanyana okanye omnye umfuyi unokukunceda ufumane ukuba ungathumela phi iisampulu kwindawo yakho kunye nendlela yokuthumela. Ukufumana umbono weemfuno zokuhambisa, jonga ILabhoratri yoPhando ngezeNdalo kwiHlabathi liphela (Uxilongo lweMfuyo) .
Ukutsala igazi, kufuneka umncedisi wokubamba ibhokhwe, kunye nezi zinto zilandelayo:
Utshwala ulungiselela kwangaphambili
3 ml iisirinji ezineinaliti ezi-3/4-intshi ezingama-20, inye ibhokhwe nganye
ukusebenzisana kokutya kunye neziyobisi
Iibhubhu zokuthambisa (ukusuka kwivenkile yezilwanyana okanye kugqirha wezilwanyana)
Umbala wecontainer top uyahluka ngohlobo lovavanyo ekufuneka lwenziwe. Qinisekisa ukuba unemibhobho echanekileyo.
Clippers, ukuba ufuna ukucheba indawo
Iphepha, usiba, kunye nokumakisha okusisigxina
Nantsi indlela yokutsala igazi kuvavanyo:
iziphumo ebezingalindelekanga ze-elm
Yenza uluhlu lwazo zonke iibhokhwe eziza kuvavanywa, ngenani ngalinye.
Bhala ileyibhile ngegama lebhokhwe, umhla, kunye negama lakho okanye igama lefama.
Yenza umncedisi abuyisele ibhokhwe kwikona kwaye ubambe impumlo yebhokhwe ngesandla esinye kwaye ujikeleze isifuba ngesinye.
Fumana umthambo wejugular ngokucinezela kwicala lasekhohlo lomqala webhokhwe kufutshane nasezantsi kwentamo.
ixabisa malini i adderall
Umthambo uphuma kancinci xa ucinezela kuyo. Ukuba ufuna, yicheba indawo ukuze ufumane indawo ekulula ukuyifumana.
Yiva umthambo kwaye ufake inaliti.
Susa ikepusi yenaliti kwaye ufake inaliti phezulu kulusu kunye nomthambo kwi-engile ephantse yafana nomthambo.
Lumka ungatyhaleli inaliti emthanjeni.
Ngobunono ubuyise umva kwiplanja.
r 180 ipilisi eluhlaza okwesibhakabhaka
Ukuba igazi alingeni kwisirinji, susa inaliti uqale ngokutsha.
Ukuba ubona igazi kwisirinji, qhubeka utsala iplanja de ube no-3 cc.
Susa inaliti, buyisela ikepusi, kwaye ubeke uxinzelelo entanyeni yebhokhwe imizuzwana engama-30.
Susa isiciko senaliti, faka inaliti kwityhubhu ebhalwe ibhokhwe kwaye utofe igazi.
Xa ugqibile ukutsala igazi kwiibhokhwe zakho, zifake iisampuli kwisikhenkcisi okanye uzilungiselele ukusiwa elebhu okanye kwiofisi yezilwanyana.
Isebenza njani risperdal
I-morphine 15 mg ipilisi eluhlaza okwesibhakabhaka
ukunciphisa umzimba kubadlali
I-donepezil hcl 5 mg
mylan a4 ipilisi emhlophe engqukuva